Ukulungiswa Kwedatha ye-Talend: Finyelela kalula, Hlanza futhi Lungiselela idatha yakho ye-CRM Martech Zone
Usanda kubuya kusuka esontweni eVegas usebenza kwenye indawo yokuhweba. Ukhathele, usilela emuva ngokuphelele ku-imeyili nakwamanye amaphrojekthi, futhi unemithwalo yemikhumbi emisha yemikhombandlela emisha edinga ukuqinisekiswa futhi ifakwe kuhlelo lwakho lweCRM. Ngigqolozele kuleso sipredishithi esikhulu samagama, uyazi ukuthi kuzokuthatha usuku lonke ukucubungula imininingwane yokuxhumana.
Ukufaka ngesandla nokuhlanza idatha yakho kufana nokubuka upende womile — uyisicefe esikhungathekisayo futhi uyisibulali-sikhathi esikhulu. Kulapho phezulu lapho kulinganiswa nencwadi yakho yokuhlola, ukwenza izitsha nokuhlanza igalaji.
Kodwa-ke, idatha ehlanzekile yingxenye ebucayi yenqubo yokumaketha neyokuthengisa. Enye indlela garbage-in = udoti-uphume. Ukungenisa nokusabalalisa idatha engalungiselelwe kungaholela emiphumeleni ekhungathekisayo nokuchitha isikhathi nemali. Hhayi-ke, kuthiwani uma bekukhona ithuluzi elilula elihlekisayo elinciphise isikhathi esasithathwa ukuhlanza nokufometha idatha yakho kusuka emahoreni kuya kumaminithi?
Ngokujabulisayo izingqondo zedatha ekhanyayo ku Ikhalenda uzwe ubuhlungu bakho futhi uphendule ngesisombululo esisha esibizwa Ukulungiselela Idatha yeTalend. Lolu hlelo lokusebenza olusha, lwamahhala lwedeskithophu lukuvumela ukuthi uhlaziye, uhlanze futhi uhlanganise idatha kusuka emithonjeni ehlukene ngemizuzu ngamathuluzi enembile, aqondiswayo ahamba phakathi nenqubo. Kufana nokuhambahamba epaki…
Kulungile, uyifunda lapha kuqala izingane! Ngakho-ke qala ukuhlela lowo mdlalo we-basketball ntambama noma i-manicure / pedicure ngoba usuzobuyisa AMAHORA osukwini lwakho. Kulungile, mhlawumbe ngithemba kakhulu lokho ngaphambili, kepha kukho konke ukungathí sina, Ukulungiselela Idatha ye-Talend, kukuvumela ukuthi uyeke ukuchitha isikhathi esibalulekile idatha yokuhlanza nokuhlunga futhi ugxilise imizamo yakho kwimisebenzi yamasu amaningi njengokuhlaziya i-ROI yomcimbi uwonke futhi ukwazi ukwaba lokho kuqonda nethimba lakho (okuzuzela amaphuzu amakhulu we-brownie-Ibhonasi !!)
Nakhu ukuthi kanjani Ukulungiselela Idatha yeTalend kungenza umsebenzi wakho ube lula. Okokuqala, ake sicabangele ezinye zezinyathelo ozithathayo lapho ufunda idatha yokuhlaziywa ukuze unqume ukuthi ngabe leyo tradeshow yakamuva ibine-ROI ebalulekile. Ukuqala, idatha yakho engcolile ingahle ibukeke iyinto encane enjengale:
Manje kufanele uhlole idatha ngokunemba; qinisekisa ukuthi amanani asetshenzisiwe avumelekile — okusho ukuthi uMnu. vs. uNkk. noma uNks .; qinisekisa ukuthi imininingwane iphelele kuyo yonke imikhakha; susa okufakiwe okuyimpinda; guqula futhi ubeke idatha ngokujwayelekile; layisha idatha ku-Marketing Automation yakho yohlelo lweCRM bese ekugcineni wenza futhi ubhale isakhiwo semininingwane ehlanganisa izinyathelo ezahlukahlukene.
Usukhathele yini? Ngi… futhi amehlo ami asagqolozele ukubheka kulesi sipredishithi esifanayo emahoreni amathathu edlule….
Kwethulwa i-Talend Data Preparation
Manje, ngokulungiselela i-Talend Data, ungafinyelela, uhlanze futhi ulungiselele idatha ngendlela elula, enembile. Okokuqala, uma ufaka ithuluzi, likukhuthaza ngesiqondisi se-pop-up sokungenisa ifayela lakho le-Excel noma ezinye izinhlobo zemithombo yedatha. Ngemuva kwalokho ukhetha leso sipredishithi futhi ngokuchofoza okumbalwa nje ungahlanza, ubeke amazinga afanele, uqedele izinkambu bese uhlunga imininingwane ngesifunda, isihloko somsebenzi, njll. Ukuze uthole ukuqonda okungcono ngekhwalithi yemikhondo yakho emisha. Ispredishithi sakho esake sabheda manje sibukeka kanjena:
Manje usungangenisa kalula idatha ehlanziwe ku-Tableau ukuze wenze umcimbi olandelayo usebenze kangcono kakhulu. Ngokwengeziwe, njengoba ubukhetha futhi uhlanza izinkambu ezahlukahlukene kuspredishithi sakho, i-Talend Data Preparation ibilokhu igcina irekhodi lalezo zikhetho. Izinketho ozenzayo bese zakha 'iresiphi' ongayigcina kufayela ukuze isetshenziswe ngokuzayo ukugwema ukusebenza kabusha. Ngakho-ke okokuqala lapho usebenza nedathasethi, wonga isikhathi. Kepha lapho idatha ivuselelwa (isb embukisweni wangonyaka ozayo), awugcini ngokunciphisa isikhathi, kepha ucisha umsebenzi owudinga ngokuphelele! (Manje unesikhathi samahhala osukwini lwakho lokuthola okungenani ikhefu lekhofi noma uhambe epaki ngesikhathi sokudla kwasemini).
Akukona Okwabathengisi Bodwa
Ukulungiselela Idatha yeTalend ibuye ilungele ngokuphelele abaphathi bezinsizakusebenza nezinzuzo, abahlaziyi bezebhizinisi nezezezimali, noma iyiphi indima echitha isikhathi esiningi isebenza ngedatha noma iklebhula izinwele zabo kuma-spreadsheet. Ngakho-ke noma ngabe uhlanza umkhondo wezentengiselwano, ubala ukubheka phezulu kokutholakala okungaba khona, uhlaziya ukuthengiselana noma ukukala amazinyo amahle kakhulu, umbono, umshuwalense wokuphila kanye nezinhlelo zokusebenzisa imali eziguqukayo zenkampani yakho — manje ukufinyelela ekuqondeni kumane nje kukuchofoze!
Uyakhanya futhi uyakwazi ukwenza okwenzayo — ngakho-ke kungani uchitha isikhathi esiningi uphikisana nedatha ngokuhlanganyela imininingwane yakho neqembu lakho? Ngakho-ke manje, umbuzo okuwukuphela kwawo okufanele uzibuze wona uthi: Ngingakutholaphi? !!!
Landa inguqulo yakho yamahhala ye-Talend Data Preparation Today!
Tags: CRMIdathaukuhlanzeka kwedathaukulungiswa kwedathaukucubungula idathaikhalendaukulungiswa kwedatha ye-talend
Umphumela Wokupakisha Ngokwezifiso Ekuthengisweni Kwakho Kwe-ecommerce?